​​कसले गर्‍यो यस्तो मर्यादाक्रम कायम ? « Jana Aastha News Online
​​कसले गर्‍यो यस्तो मर्यादाक्रम कायम ?
प्रकाशित मिति : २५ असार २०७४, आईतवार १८:३३
​स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरण त सकियो तर अझै सक्नैपर्ने कामको सूची भने छोटो छैन । मधेसीलाई फकाएर प्रदेश नम्बर २ मा चुनाव गराउनु छ । त्यसपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन माघ ७ भित्र सक्नु छ । यसैबीच राष्ट्रिसभा पनि गठन गर्नु छ ।